यदि तपाईं पनि सुत्नु अघि स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, सावधान ! यस्तो हानि हुनसक्छ - Technology Khabar
» यदि तपाईं पनि सुत्नु अघि स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, सावधान ! यस्तो हानि हुनसक्छ
तपाई दिनभर काम गरेर आँखाले राहत पाउँदैन्, यदि त्यसपछि पनि तपाइँ राती सुत्नु अघि स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भने यसले तपाइँको आँखा सुख्खा हुन थाल्छ र आँखा चिलाउने समस्या शुरु हुन्छ।
जब देखि इन्टरनेट डाटा र स्मार्टफोन्स सबैको पहुँचमा आएको छ त्यसँगै यी धेरै प्रयोग हुन थालेको छ। व्यक्तिले स्मार्टफोनको साथ बढी समय खर्च गर्न शुरू गरेका छन्, चाहे यो कामको कारण हो वा समय बिताउनका लागि होस् । तर स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोगले तपाईंको स्वास्थ्य र आँखामा नराम्रो असर पार्छ।
प्रायः यस्तो देखिन्छ कि मानिसहरूले आफ्नो स्मार्टफोनको डिस्प्ले ब्राइटनेस पुरै अन राख्दछन्, सुत्नु अघि स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् । स्मार्टफोनको चमक र फोनको निरन्तर प्रयोगको कारण, हाम्रो आँखामा नराम्रो प्रभाव पर्दछ। फोनबाट उत्सर्जित प्रकाशले सिधा रेटिनालाई असर गर्छ, जसको कारण आँखा चाँडै बिग्रन थाल्छ। यो मात्र होइन, बिस्तारै हेर्ने क्षमता पनि कम हुन थाल्छ र टाउको दुखाइ बढ्न थाल्छ।
आँखा सुख्खा हुन्छन्
तपाई दिनभर काम गर्दा तपाईँको आँखाले राहत पाउँदैन्, त्यस पछि पनि यदि तपाइँ राती सुत्नु अघि स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको आँखा सुख्खा हुन थाल्छ र चिलाउने समस्या हुन थाल्छ। राति सुत्नुअघि स्मार्टफोनको प्रयोगले आँखामा सुख्खापन ल्याउँछ । आँखा सुख्खा हुने भएको कारण आँखा चिलाउने र जलत हुने साथै, आँखाको अश्रु ग्रन्थीमा निकै नोक्सान पुग्छ ।
आँखाको कोष र नानी सुन्निन थाल्छ
स्मार्टफोनको धेरै प्रयोगले आँखाको कोषबाट पानी आउन सुरु गर्छ । साथै, मोबाइलबाट निस्किने खराब किरणले नोक्सान दिलाउँछ । स्मार्टफोनको धेरै प्रयोगले आँखाको परेला झिम्क्याउने प्रक्रिया कम हुन्छ । आँखाको नानी र नसा सुन्निन थाल्छ र यसले टाउको दुखाई पनि बढाउँछ ।